December 29, 2007, 5:35 am Filed under: Strongly Suggestion စည်းလုံးကြပါ
2008 Jan2ရက်နေ့တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးမှ Mandarin Hotel, Orchard တွင်ပြုလုပ်မည့် လွတ်လပ် ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကပွဲ၌ Poly ကျောင်းသားဟောင်း/သစ်များ အပါအ၀င် န အ ဖ ကပ်ဖား ယပ်ဖား အောက်ဆွဲများ၊ မျိုးချစ်စိတ် ကင်းမဲ့သူများ ဖျော်ဖြေကပြ အသုံးတော်ခံရန် ရှိပါသည်။န အ ဖ များကို ကပြဖျော်ဖြေမည့် အက၀ါသနာရှင်များ စက်တင်ဘာအရေးအခင်း အပါအ၀င် အရေးအခင်း တိုင်း မှာ ကျဆုံးသွားခဲ့သော ရဟန်း၊ ရှင်လူ ပြည်သူတွေရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု၊ု န အ ဖ စစ်အာဏာရှင်တွေ ရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမှုကို ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။
စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်သူများ Like this:Like Loading...
န၀တနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ကိုထောက်ခံသောသူတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေဆိုတာ၊ပြတ်ပြတ်သားသား စည်းခြားသင့်ပြီး၊၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့ လုပ်ဆောင်ပေးကြပါလို့တောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုပါတယ်၊ ပြည်တွင်းမှာသော်၎င်း၊ ပြည်ပမှာသော်၎င်းန၀တကျင်းပသော လွတ်လပ်ရေးပွဲကို တက်ရောက်ကျသော အလွှာအသီးသီးကလူတွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့စာရင်းစုကာကြေငြာသင့်ပါတယ်၊(နံမည်၊နေရပ်၊ဓါတ်ပုံ၊မိဘ)
ဒီထက်ပိုပြီးတော.့ ရဟန်းရှင်လူအပေါင်း၊ ပြည်သူအပေါင်း၊အလုပ်သမား၊လယ်သမား၊အတတ်ပညာရှင်၊အသိပညာရှင်၊ကျောင်းသားတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုချစ်သော တပ်မတော်သားအားလုံး ပြတ်ပြတ်သားသား ပြည်တွင်းတွင်ခေါ်ဆောင်နေသော January 4,2008 ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဖေါ်ဆောင်မှူ့ အောက်တွင် ရပ်ကြရန်နှင့် စစ်အာဏာရှင်စံနစ်နှင့် အာဏာရှင်အားအပြီးသက်ကြပါစို့ ။
December 29, 2007 @ 7:53 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI